FJKM Ankadifotsy SA / Fampianarana / Accueil - FJKM Ankadifotsy
16/06/2013 04:40 -5 min 09 jona 2013
Dimy minitra 09 jona 2013Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'I Jesoa Kristy Rankizy,Tantaran'i Vonjy, zazavavy 14 taona no anombohanna ny fampianarana anio. Sariaka dia sariaka i Vonjy ka nanana namana be dia be....
18/04/2013 13:43 -5mn 14 avril 2013
« Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanany lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. » Jaona 3.16...
30/03/2013 14:46 - FAMELABELARAN-KEVITRA: “Nohariana ho ankohonan’Andriamanitra isika ka mifankatia ao anatin’ny fahasamihafana”
Izany no lohahevitra novelabelarina nandritry ny famelabelaran-kevitra nokarakarain’ny “Cellule de Prière Sekoly Alahady”, niarahana tamin’ny Mpitandrina RALISON GILBERT(Fitandremana F.J.K.M. Atanimena Antsinanana), ny Sabotsy 02 Martsa 2013 tao amin’ny Akanin’Aina. Fizarana roa lehibe no namaritan’ny Mpitandrina ny atao hoe : Ankohonana. Efa planin’Andriamanitra hatrany amboalohany ny ankohonana; efa nomaniny koa ny zavatra rehetra ho an’izany ankohonana izany talohan’ny nanamboarany azy(Gen. 1 : 27).Adama no olombelona namboarin’Andriamanitra voalohany ary Eva no faharoa izay namboariny tamin’ny alalan’ny taolan-tehezan’I Adama ihany(Gen.2 : 22), dia nentiny tany aminy, ka hita fa sahaza ho vadiny. Adama sy Eva izany no ankohonana efa namboarin’Andriamanitra voalohany....
30/03/2013 14:15 -5mn sekoly Alahady ny 17 Martsa 2013
Miresaka amin’Andriamanitra isan’andro: Sarotra ny fiainana ka tsy mihaona amin-drainy mihitsy i Kalita zanany lahy, alina izy vao miditra ny trano, avy hatrany dia any amin’ny efitranony any, vao mangiran-dratsy indray dia lasa… Dia toy izany foana isan’andro....
26/02/2013 03:33 -5 mn. 24 feb 2013
Mba hanontany anareo aho ry ankizy, mba tia ny tenin'andriamanitra ve isika ? mba hatsangano kely ary ny baiboly izay nitondra isika ankizy. Maromaro ihany raha oharina tamin'ny fidirana voalohany. Hiara-mamaky ny soratra masina ary isika ao amin'ny salamo faha 119 and 103: Endrey ny hamamin'ny teninao raha andramako, mihoatra nohon'ny tantely ato ambavako aza. ...
26/11/2012 09:40 -Jaona 10:11
Ny 5mn sekoly alahady tamin’ny alahady faharoan’ny volana Novambra 2012 dia niainga avy amin’ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Jaona 10:11 manao hoe: “Izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany”. Nasian’ny mpampianatra sekoly alahady fihetsika ary narafiny ho tonokira izy io. Tany amin’ny farany nanentana ny Mpitandrina hoe: azonareo atao feonkira fanairana amin’ny finday izay hira izay rankizy Ity ilay tononkira: ...
31/08/2012 20:49 -Dimy minitra Sekoly Alahady
Une intro de l'angle prière...
23/08/2012 09:12 - Fampianarana Sekoly Alahady 15 Mey 2011
Salamo 8.2a sy ny Jeremia 33.3 no Andinin-tSoratra Masina zaraina anioSalamo 8.2a&nbsp;:"Avy amin’ny vavan’ny ankizy madinika sy ny minono no nanorenanao hery" Jeremia 33.3&nbsp;:&nbsp;"Antsoy Aho, dia...
23/08/2012 09:11 - 5 mn. sekoly Alahady 29 Mey 2011
Indray andro nandeha nitsangatsangana i Franky sy i Tony. Miresaka dia miresaka tokoa moa izy roalahy ireto ary nisy fotoana tsy nifankazahon’ny resaka teny an-dàlana fa samy nanana ny mariny.Niteraka fifamaliana i...
23/08/2012 09:10 -SEKOLY ALAHADY : Fanilo sy Fanazavana
SEKOLY ALAHADY&nbsp;:Fanilo sy FanazavanaNy alahady 11 desambra 2011 teo no nofaranana ny fankalazana ny faha 120 taonan’ny Sampana Sekoly Alahady eto amin’ny FJKM Ankadifotsy. Nandritry ny fotoam-pivavahana fi...